Home Wararka M. C/risaaq oo ka dhigay W. A. Dibada aalad Farmaajo kula dagaalo...
M. C/risaaq oo ka dhigay W. A. Dibada aalad Farmaajo kula dagaalo beelo & dowladnimada Soomaaliya
Wasiirka Arimaha Dibadda ee Soomaaliya Maxamed Cabdirizaaq oo in ka yar sadax bilood Wasiir ka ah Wasaaradda ayaa waxa uu ka dhigay Wasaraadda aalad loogu adeegsado Madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo.
Wasiirka ayaa waxa uu habeen iyo maalin ku jiraa safaro uu ku kala bixinayo caalamka isaga oo taageero dhaqaale iyo mid siyaasadeed u raadinayo Farmaajo. Sida ay noo xaqiijeen qaar kamida mas’uuliyiinta Wasaaradda, Wasiirka ayaan marnaba la socodsiin madaxda Wasaaradda kulamada uu galiyo, cida uu la kulmayo iyo ujeedada safarkiisa. Dhmaan kulamada uu galo ayaa waxa la gasho xaaskiisa oo ah haweenayn ajnabi ah.
Qofka kaliya ee uu la hadlo waa Farmaajo, waxa ayna kawada hadlaan sida kaliya oo lacag iyo taageero siyaasadeed loogu heli lahaa waqti kordhinta Farmaajo. Dhanka kale Maxamed Cabdirisaaq ayaa waxa uu qoraalo uu ku eedeynayo madaxdii hore iyo madaxda dowlad goboleedyada Jubbland and Puntland uu u gudbiyay qaar kamida wadamada taageera Soomaaliya.
“Waxa aan mooday iyo waxa uu ku soo baxay ina Cabdirisaaq waa ay kala fog yihiin. Mustaqbalkiisii siyaasadeed waxa ay la dhiman doontaa kan Farmaajo. Waxaa sidoo kale ii cadaatay in uusan markiisii horayba ahayn qof siyaasi ah oo bisil, han leh, laakiin ku fiican in uu madaxda u qaadumeeyo, noqdana aalad lagula dagaalo dowladnimada Soomaaliya” Sidaas waxa yiri mid kamida rug cadaaga siyaasadda Soomaaliya.
Waxa uu intaas ku daray “waxaa iyadana la yaab nagu noqotay in xaaskiisa oo ah qof ajnabi ah ay si buuxda uga qaybgasho shirarka gaarka ee uu galo kuwaas oo looga hadlayo arimo xasaasi ah, waa danbi weyn oo laga galayo qaranimada iyo dowladnimda Soomaaliya in sirtii qaranka ay gacanta ku hayso naag aan Soomaali ahaynin” .
Ma aha kaliya in uu ka shaqeeynayo waqti kordhinta Farmaajo, laakiin waxa uu isku dayay in uu dacweeyo ama eedeeyn u sameeyo madaxda Dowlad Goboleeyda Puntland iyo Jubbaland isaga oo ku tilmaamay madaxdaas in ay yihiin dagaal ogoyaal dalka bur bur u horseedayo.
Su’aashu waxa ay tahay maxaa talo u ah marka Farmaajo lagu qasbo in uu iscasilo ama xoog looga saaro caasimada? Maxaa ku qasbaya in uu la dhinto shaqsi gabalkiisa sii dhacayo?.. Maxaa keenay in uu Wasaarad ka dhigo meel lagu dhibaateeyo beelo gaar ah?